मुख्य समाचार Archives - Page 47 of 65 - AahaSanchar
Home मुख्य समाचार (Page 47)
आहा संचार संबाददाता नेपाली काग्रेस रुकुमको यहि जेठ २२ र २३ गते जिल्ला कार्यसमितिको बैठक बसेको छ । बैठकले बिभिन्न ७ वटा निर्णयहरु गरेको छ । बैठक पछि जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्तीमा जिल्ला समितिमा दुई पदाधिकारी मनोनित देखि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा छाँया सरकारलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।…
आहा टक नाम : पदम नारायण श्रेष्ठ (कराँते प्रशिक्षक) ठेगाना : कोहलपुर ३, बाँके तपाइलाई कसैले हिजो आजकादिनहरु कसरी बिताइरहनुभएको छ भनी सोधेमा के जवाफदिनुहु्न्छ ? नेपाल गोजुरिया दोे युजेनकाई कराँते को जिल्ला स्तरमा कमिटि गठन गरिरहेकाले यसैमा व्यस्त छु बाल्यकालको कुरा गर्दा,तपाईको बाल्यकाल कसरी बित्यो ? घरपरिवारमा म भन्दा…
एक किशोरी दुईजनाबाट बलात्कृत
रुकुम १८, जेठ : रुकुम पश्चिममा एक किशोरी बलात्कारको अभियोगमा दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिका ५ का १८ बर्षिय बिशाल केसी र सोहि गाउँका धनसिंह बाँठा रहेका छन । उनीहरु दुबैलाई कमला पुन (नाम परिबर्तित) लाई पटक पटक करणी गरेको अभियोग छ ।…
शिक्षकहरु परिक्षामा गएपछि बिद्यालय बन्द